New Day Jobs | How To Stay Positive At Work | Career Blogs
Workplace Success 09 Jun 2020
လုပ်ငန်းခွင်မှာ စိတ်ညစ်စရာတွေရှိနိုင်သလို ပျော်စရာတွေလဲရှိ နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ကတော့ စိတ်ညစ်စရာတွေပဲ အမြဲတွေ့နေရတယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ကိုယ်ကို တစ်ယောက်တည်းလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ အောက်က နည်းလမ်းတွေကတော့ အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး ဖြေရှင်းနိုင်မဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။
၁. သင်ကိုယ်တိုင်လဲ မှားနိုင်ပါတယ် ဆိုတာကို စိတ်ထဲမှာ ထည့်ထားပါ
ကျွန်တော်တို့ လူတွေဟာ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်ပဲမှန်တယ် ကိုယ်နဲ့ မတူရင်သူမှားတယ် ဆိုပြီးတွေးတတ်ကျပါတယ်။ အဲဒီယူဆချက် က လူအများနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ သင့်ကိုဒုက္ခ ပေးနိုင်ပါတယ်။တစ်ခါတစ်နေ မတူညီတဲ့ နောက်ခံတွေကနေ လာတဲ့လူတွေစုနေတာဖြစ်တဲ့ အတွက် ကိစ္စတစ်ခု အပေါ်ကို ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။ အဲတော့ သင်ကိုယ်သင် အမြဲတမ်းမှန်နေတယ်ဆိုပြီး စိတ်ထဲမထည့်ထားပါနဲ့ လို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။
ဘယ်လောက်ပဲကိုယ်သဘော မကျတဲ့နေရာဖြစ်နေပါစေ ကိုယ်မလုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်ဖြစ်နေပါစေ ကိုယ်ကအခြေအနေကို ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်း မရှိသေးဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်ဖြစ် သင့်လုပ်နိုင်သလောက်ကို အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ။ သင်လုပ်တာက လိုအပ်နေရင်တောင် အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားတဲ့ အတွက် သင့်ကိုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့အသိအမှတ်ပြုတာကို ရရှနိုင်ပါတယ်။
၃. ပြဿနာတွေကို ကိုယ့်ရဲ့ ပြင်ပဘဝကို ယူမသွားပါနဲ့
ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ် အလုပ်မှာ ပြဿနာတွေ၊ စိတ်ရှုပ်စရာတွေ၊မကျေနပ်စရာတွေနဲ့ အမှားတွေကို ကြုံရလေ့ရှိပါတယ်၊ ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဆန်းစစ်ပြီး သင်ယူပြီးသွားရင် သင့်ရဲ့နေ့စဉ် ဘဝထဲကို သယ်မသွားပါနဲ့၊ တကယ့် professional ကျတဲ့ သူတွေဟာ ဒီန့မကျေနပ်စရာ ကို နောက်နေ့ကို ယူသွားလေ့မရှိပါဘူး။